Mamita-tena ve ny Olona Raha Manana Finoana? | Valim-panontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Mamita-tena ve ny Olona Raha Manana Finoana?
Tsy mijery ny zava-misy sy tsy misaina tsara ny olona sasany rehefa manana olana. Misy, ohatra, lasa miankin-doha amin’ny toaka mba hanadinoana ny olana mahazo azy. Mety ho lasa hatoky tena kokoa izy amin’ny voalohany ka hieritreritra fa ho afaka hiatrika olana. Mamita-tena anefa izy satria ho voa mafy rehefa mandeha ny fotoana. Mamita-tena toy izany koa ve ny olona manana finoana?
Misy milaza fa mino an-jambany fotsiny ny olona manana finoana. Tsy te hampiasa saina, hono, izy ireny sady tsy te hanova ny zavatra inoany mihitsy na misy porofo tsy azo lavina aza. Te hilaza ny olona miteny toy izany fa tsy miraharaha ny tena zava-misy ny olona mpivavaka be.
Betsaka ny zavatra lazain’ny Baiboly momba ny finoana. Tsy mampirisika ny olona hino an-jambany na ho kamo hampiasa saina mihitsy anefa izy io. Milaza aza izy io fa tsy dia nandia fiainana na adala mihitsy ny olona mino izay rehetra lazaina aminy. (Ohabolana 14:15, 18) Adala tokoa isika raha mino zavatra iray nefa tsy manamarina izany akory! Toy ny hoe mitampi-maso isika nefa asaina miampita arabe feno fiara mivezivezy dia manao tokoa.
Tsy mampirisika ny olona hino befahatany fotsiny àry ny Baiboly fa ho mailo foana mba tsy ho voafitaka. (Matio 16:6) Mailo foana isika raha ‘mampiasa saina’ tsara. (Romanina 12:1) Mampianatra antsika ny Baiboly fa mila mitady porofo isika vao tokony hino zavatra iray. Mampiseho izany ny taratasin’ny apostoly Paoly.
Nanoratra ho an’ny Kristianina tany Roma i Paoly. Tiany hino an’Andriamanitra izy ireo. Tsy tiany anefa raha noho ny teniny fotsiny no nahatonga azy ireo hino. Nampirisika azy ireo kosa izy mba handinika ny porofo hoe tena misy Andriamanitra. Hoy izy: “Ny [toetran’Andriamanitra] tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy, dia hita mazava hatramin’ny namoronana izao tontolo izao, satria hita amin’ny zavatra nataony. Koa tsy afa-tsiny [ireo olona mandà ny fahefan’Andriamanitra].” (Romanina 1:20) Izao koa no nosoratany ho an’ny Hebreo: “Mazava ho azy fa nisy nanao ny trano rehetra, fa ilay nanao ny zava-drehetra kosa dia Andriamanitra.” (Hebreo 3:4) Nasainy nifantina izay zavatra inoany koa ny Kristianina tany Tesalonika. Tiany ‘hamantatra tsara ny zava-drehetra’ izy ireo.—1 Tesalonianina 5:21.
Mety ho lasa ampinga lehibe afaka miaro antsika ny finoana
Toy ny miantehitra amin’ny hazo boboka ny olona mino zavatra tsy misy porofo. Mamita-tena izy ka ho voa mafy. Nilaza i Paoly fa ‘nafana fo ho an’Andriamanitra’ ireo mpivavaka be tamin’ny androny, “saingy tsy araka ny fahalalana marina tsara.” (Romanina 10:2) Ilaintsika àry ny mankatò ny Romanina 12:2 hoe: “Havaozy ny sainareo, mba handinihanareo tsara ka hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, izay tsara sady ankasitrahana no tonga lafatra.” Tsy mamita-tena isika raha miorina amin’ny fahalalana marina tsara an’Andriamanitra ny finoantsika. Ho toy ny “ampinga lehibe” manampy antsika hifandray amin’Andriamanitra kosa izy io ary miaro antsika tsy ho kivy.—Efesianina 6:16.